Sheekada filimka Taxiwaala: Vijay Deverakonda oo la imaaday filim cabsi mada daalo leh – Filimside.net
Sheekada filimka Taxiwaala: Vijay Deverakonda oo la imaaday filim cabsi mada daalo leh
November 19, 2018 Zakarie Abdi
Vijay Deverakonda tilaabo walbo uu qaado waa mid saxan ilaa haatan madaama uu noqday xidig Tollywood ku qabsaday doorashada aflaanta sheeko ahaan aad u tayo wanaagsan.
Vijay Deverakonda waxaa tiyaatarada u saaran filimka Taxiwaala waa mid cabsi, qayaali iyo mada daalo isku jiro sidoo kalena lagu qiimeenayo wiilkan fariimaha kala duwan ee uu dooranayo sida uu kaga baxsan karo.
Jilaayaasha filimkan: Vijay Deverakonda, Priyanka Jawalkar, Malavika Nair, Ravi Prakash iyo Uttej
Fariinta Filimka Taxiwaala Oo Kooban: Shiva (Vijay Deverakonda) wuxuu iibsanayaa gaari qadiimi ama duq ah si uu lacag kaga helo asigoo darawal habeenkii shaqeesto noqonaayo. Laakiin baabuurkaan waxaa ku dhex jirto ruuxaan isaga noloshiisa saameyn ku yeelaneyso.
Shiva (Vijay Deverakonda) wuxuu ku qasbanaanaa inuu baaro ruuxaanta gaarigiisa ku dhex jirto halka ay ka timid inay dhibane tahay iyo arimo kale oo cabsidooda wataan.
Shiva (Vijay Deverakonda) marka hore wuxuu ahaa wiil aqoon yahay ah oo shaqo uu u qalmo heli waayay kadibna go’aansaday inuu gaarigan duqa ah qiimo jaban ku iibsado si uu walaalkiis iyo dumaashadiis noloshooda u dabaro jaceylkiisana Priyanka Jawalkar nolol ula wadaago laakiin ruuxaanta gaarigiisa ku dhex jirto ayaa wax walbo ka qaribeyso oo ka rabto inuu marka kowaad arimo badan oo uusan waxba ka ogeyn wax ka xaliyo.
Bandhiga Jilaayaasha: Vijay Deverakonda oo si heer sare ah u jilay filimkan halkiisa saac hore sidoo kalena sida guud uu muujiyay inuu yahay atoore naadir ah oo Koonfur kasoo baxay kaasi oo door walbo sameyn karo.
Priyanka door dhex dhexaad ah ayay filimkan ku leedahay halka Malavika Nair iyadana dhacdooyin muhiim ah filimkan ku leedahay. Dhamaan caawiyaasha kale ee filimkan kasoo muuqdeen sida Madhunandan, Sijju iyo kuwo kale doorarkooda waa kuwo wacan.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Taxiwaala:
Muusigada iyo heesaha filimkan waa kuwo wacan.
Qaabka loo faaf reebay waa heer sare
Action-kiisa waa mid xadidan balse kusoo jiidanayo.
Qaabka sheekada loo dhigay oo cabsi mada daalo isku jirto ah oo kusoo jiidaneyso.
Bandhiga Vijay oo heer sare ah kuna muujinaayo inuu door walbo sameyn karo.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Taxiwaala:
Qaybta labaad ama halka saac dambe oo xoogaa cajis badan sheekada filimkan ka muuqato.
Gunaanad: Taxiwaala waa filim cabsi iyo mada daalo wacan leh sidoo kalena sheekadiisa uu si wacan isugu daba riday Director Rahul Sankrityan halka Vijay si heer sare ah u matalay. Waa hubaal filimkan miisaaniyada yar xambaarsan sheekadiisa wacan tahay in daawadayaasha tiyaatarada ku qasbi doono inay soo aadaan kadibna guul wacan uu gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Taxiwaala ee Vijay aad loogu amaanay doorkiisa cusub: